KCRW dia manangana fampitana vaovao amin'ny Radio sy ny Radio Media vaovao NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Home » Content Creation » Audio » KCRW dia manangana fampitana vaovao amin'ny Radio sy ny Radio
KCRW nifindra vao haingana avy tao ambanin'ny tranobe iray ao amin'ny campus campus Santa Monica College, mankany amin'ny foiben'ny $ 38-tapitrisa $ Ivotoerana vaovao an'ny haino aman-jery sy Design ho an'ny Santa Monica College. Ity fotodrafitrasa vaovao ity dia fahatsiarovana ny fanangonam-bola 11, famolavolana, fametrahana, fampidirana, fampidirana ary fampiofanan'ireo mpiasan'ny KCRW sy ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny tetikasa. Teo am-pivoarana ilay volavola dia onjam-peo 6 tapitrisa dolara izay natsangana ny fotodrafitrasa niely mba hampitomboana ny fiaraha-miasa ary hanomezana ny mpiasa ny fitaovana ilaina entina hitondrana ny biraony amin'ny vanim-potoana nomerika.
"Io trano io dia misy rihana telo amin'ny fametrahana kabine, tsy tafiditra ao an-tampon-trano, efitrano milina 1 master, telo mpanohana IDF, ary saika studio 20 sy toerana misy dinidinika," naneho hevitra Steve Herbert, lehiben'ny injeniera amin'ny Broadcast.
Ny fon'ny tetikasa dia ny VP Technology izay Key Code Media, Edward Locke. Ed sy ny ekipany mpanamboatra injeniera dia namolavola ny fitaovana audio-visual sy haino aman-jery ilaina mba hanomezana fahafaham-po ny tontolon'ny tetikasa. Isaky ny fampiononana audio, mikrô, zanabolana mpandefa, efitrano fanaraha-maso, mpizara, ary studio dia tokony hosaintsaina tsara, hiantoka ny fotodrafitrasa ampy hita ao amin'ny efitrano tsirairay, izay ny rafitra rehetra dia mifanentana, ary ny tariby tsirairay dia voafaritra.
“Tetikasa goavambe ity izay misy ny integrator system izay manana fahalalana lalina momba ny fantsom-pahalalana maro samihafa amin'ny famoahana sy famokarana, fandefasana radio ary teknolojia-peo. Key Code Media no natao ho an'ny fanamby, ” hoy i Ed Locke naneho hevitra.
Misintona ny iray amin'ireo rihana telo ao anatin'ny efitranon'ny radio KCRW vaovao. Ity gorodona ity irery dia manana 10 eny amin'ny habakabaka, tafatafa, ary toerana famokarana ampiasaina amin'ny mozika sy ny vaovao.
RADIO STATION DESIGN, FUNDRAISING AND INTEGRATION - ANTOKO 11 YEAR
Ny famolavolana teknika mialoha ho an'ny onjam-peo KCRW vaovao dia nanomboka tany 2012, ka ny Key Code Media dia nandresy tamin'ny tetik'ady fampidirana rafitra 6 tapitrisa ao amin'ny 2014. Na izany aza, tsy tamin'ny tara-2017 no nanomboka ny fametrahana kabary sy fametrahana fandefasana fampielezam-peo sy horonan-tsary. Ka inona no naharitra ela?
Tao amin'ny trano tranainy efa hatry ny 35 taona mahery izao ny trano KCRW dia fotoana tokony hifindra. Niara-niasa tamindry ireo mpivarotra, arsiteky, elektrisianina, ary mpikamban'ny rafitra mba hahazoana antoka fa voalamina tsara ny andiany tsirairay. Tany am-piandohan'ny fanamboarana dia nisy olana lehibe nipoitra tamin'ny farany, ka nampiatoana ny fananganana, ary taorian'izay dia nanohy ny fampidinana ireo olana mitohy izay miadana ny fivoarana.
"Nandritra ny tetik'asa fananganana, na dia nandritra ny fifamaliana teo amin'ny mpiady nifototra tamin'ny fanamarihan'ny Key Code Media's Ed Locke dia teo an-toerana isan'andro, ny fanombanana ny foto-drafitr'asa, boaty serivisy fampielezam-peo ary ny fantsom-pamokarana elektrika. Ny lesoka kely nataon'ireo mpiantoka hafa dia mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny tambajotra, ny fanamboarana fanaka manokana ary ny fametrahana fitaovana dia misy atahorana amin'ny ambaratonga rehetra amin'ity tetikasa ity, "hoy i Steve Herbert.
Fanamby iray hafa no tonga avy amin'ny fahataran'ny tetikasa. Ny teknolojia fampitana tamin'ny voalohany tamin'ny sehatry ny 2014 dia najanona tamin'ny fotoana nanombohana ny fandaminana tamin'ny taona 2017. Ny teknolojia miova haingana ny faharetana refesina amin'ny 'taona' dia miteraka fanamby miavaka.
"60% ny fitaovana amin'ny famolavolana voalohany dia tsy maintsy averina arahana amin'ny fotoana nananganana sy fametrahana azy. Miaraka amin'ny entana tsipika 1,200 voarohirohy amin'ity tetik'asa ity ny fitaovana tsirairay ao anaty lisitra ilaina mba ho voaporofoina ao anaty làlan-tariby mifandray, "hoy i Ed Locke miaraka amina chuckle.
AUDIO OVER IP (AoIP) FIVORIANA FAHADIANA
Ny tsirairay amin'ireo mpiasa miasa amin'ny 85 + KCRW sy ny fampiononana audio dia mizara ho an'ny fizarana sy fiaraha-miasa. Ny tranobe dia misy sehatra 25 studio, ao anatin'izany ny efitrano 2 On Air Control, kluster 3 Interview Room, efitrano fandraisam-peo Audio sy Video, ary efitrano famokarana am-polony mahery. Ny efitrano tsirairay dia azo ovaina amin'ny habaka maro, amin'ny alàlan'ny Audio Over IP (AoIP).
Ny mpanangom-baovao sy mpamokatra KCRW dia afaka miditra sy mitantana izay Pro Tools na Dalet tetik'asa rehetra amin'ny tamba-jotra avy amin'ny efitrano rehetra ao amin'ilay trano. Tetezamita lehibe io.
“Taloha, ny habakabaka an-tserasera dia tao amin'ny efitrano iray. Te hanana ny mozika ataonay ny DJ ataontsika fa avy eo dia nirifatra avy hatrany mba hahafahan'ny ekipa mpampita vaovao hanombohana ny resaka 11 am talk. Miaraka amin'ity fotodrafitrasa vaovao ity, ny efitrano tsirairay dia studio an-tserasera an-tserasera aorian'ny fahatapahana roa fotsiny. ”
Na izany aza anefa, nisy ny olana, nandritra ny fananganana AoIP - mazoto Ny Fitaovana Pro mandeha amin'ny toeram-piasana Mac dia tsy mifanentana amin'ny tamba-jotra Axia Livewire AoIP. Manampy ny fahasarotany, ny KCRW dia tsy te hampiditra dingana fiovam-po dizitaly ao amin'ny rojo fihenam-peo.
Mba hamahana izany olana izany, ny injeniera Key Code Media dia niara-niasa tamin'i Axia sy Ravenna mba hanaparitaka ny fanamboarana mahazatra izay mampifandray ny ProTools miaraka amin'ny fantsom-peo 32 bi-lalana amin'ny alàlan'ny tariby CAT6 tokana. Izany dia tsy vitan'ny KCRW nandroaka ny lovan'izy ireo ProTools I / O, fa nitombo ihany koa ary nanatsara ny fahaizan'ny làlam-pandehanana.
ROOFTOP TRANSMITTERS - FANAOANA NY MATY
Mazava ho azy fa onjam-peo izy ity. Na dia amin'ny fampielezam-peo maoderina aza dia mbola miantehitra amin'ny mpitaovana onjam-peo tsimoramora ankehitriny ny mpampita vaovao zanabolana fifandraisana. Teo an-tampon'ny trano vaovao, nisy vatan'ny crane no nalaina hampita ny fampitaovana ho any an-danitra ary hampifanaraka azy ireo amin'ireo toerana misy ny mpampita sy satelita.
“Ny mpitazana rehetra dia mila manana andalana-toerana ao amin'ny loharanon-dry zareo na toerany. Rehefa vita ny kajy rehetra teo aloha dia hitanay fa napetraka teo ambonin'ny lampihazo ny tongotra roa metatra avo noho ny sary tany am-boalohany, ny fitaovana fanohanana rooftop.
Taorian'ny fahitana ny fiovan'ny tafo tampon'ny tafo, ny ekipa Key Code Media, miara-miasa amin'ny tranoben'ny tranobe dia namorona modely 3D tamim-pitandremana mba hijery sary an-tsaina ny fitaovana tsirairay. Ny haavon'ny haavo avo indrindra sy ny zoro dia voafaritra mba hahazoana rohy azo antoka mandritra ny fisorohana ny fifandirana ara-batana amin'ny fitaovan-trano hafa. Raha ny fahafantarana ny toetoetran'ity fitaovana ity sy ny filàna fitaovana mavesatra arakaraka ny fotoam-pianarana dia tsy misy safidy fa tonga dia sambany.
VIDEO AO RADIO STAD
Inona no ataon'ny fitaovana video ao amin'ny onjam-peo KCRW? KCRW dia onjam-peo tsy manam-paharoa- manome vaovao, mozika ary fandaharana fampisehoana mivantana. Maneho seho an-tsehatra amin'ny alàlan'ny karazan-tarika fanta-daza sy eo an-toerana ny maraina Become Eclectic- ao anatin'izany ny mpanakanto toa an'i James Blake, Beck, Jungle, Hot Chip, ary Leon Bridges. Ny hetsika mozika tsirairay dia alefa amin'ny fantsona YouTube KCRW, izay mirehareha amin'ireo mpanaraka 303K mahavariana.
Tsy maintsy namantatra ny fomba tsara indrindra hametrahana ny fampisehoana mivantana ny toeram-piantsonana, miaraka amina mpiady horonantsary tery. Ny fananganana farany 4k-mahavita Sony fakan-tsary napetraka manerana ny studio, nifandray tamin'ny efitrano fandraisam-bahiny iray notohanan'ny Ross Carbonite ho an'ny famindrana, Ross Expressions ho an'ny fakana sary, Ross Inception ho an'ny famahanana haino aman-jery sosialy, tohanan'ny Ross Ultrix mpampitondra hafatra. Ny votoatin'ny horonantsary rehetra avy amin'ny sehatra fampisehoana dia voatahiry ao amin'ny Studio Network Solutions Tambazotra fitahirizana EVO, izay ahafahany manova ao amin'ny Adobe Premiere Pro na Final Cut Pro avy amin'ny ekipa marketing KCRW.
Ny efitrano fivoaran'ny studio dia misy jiro sy gorodona ary mpandahateny, napetraka ny fakan-tsary PTZ, ary fantsom-baravarankely ho an'ireo mpankafy sy mpamatsy vola mba hankafy ny fampisehoana mivantana.
Ny hazavan'ny fampisehoana mozika MBE rehetra dia efitrano fanaraha-mason-dahatsoratry ny fanamafisam-peo izay notohanan'ny Pro Tools, console SSL C200, famonosana ireo fitaovana fanodinana audio, ireo mpihaino Adam Audio, ary ny fizarana audio MADI sy Dante. Ny fitaovana rehetra tao amin'ny efitrano dia nofonosina ny fanaka mahazatra mba hahatonga ny efitrano ho lasa toy ny fanaraha-maso ny iraka ho an'ny USS Enterprise.
FIVORIANA NY FIVORIANA NY FIVORIANA NY FIVORIANA
“Tonga tany ivelan'ny toerana izahay teo amin'ny efitrano fandiovana taloha. Ny santimetatra tsirairay dia nampiasaina ho an'ny efitrano fifehezana an-tserasera na toerana tokana. Tsy nisy toerana hihaonana. Miaraka amin'ilay toerana vaovao dia manana làlan-jiro misokatra isika miaraka amin'ireo efitrano fikaonandriana an'ny fanjakana. Ny fahafahantsika manao fivoriana kely-antonony dia nanatsara ny fahafahantsika hiara-miasa », hoy i Steve.
Ny efitrano fivoriambe tsirairay dia ahitana rafitra rindrambaiko fanaraha-maso, fanamafisam-peo, ary rafitra fanaraha-maso misy Crestron. Ny ekipan'ny KCRW dia manana ny fahafaha-manasa ny fiaraha-miasa amin'ny fanaovan-tsonia an-tsoratra sy hizara ny fandraisam-peo sy ny efijery mandritra ny fivoriana zoom. Ao amin'ny tambajotra Crestron tsirairay koa ny efitrano fandraisana ny fihaonana tsirairay, izay mamela ny efitrano marobe ao anatin'ny trano iray izay mifandray amin'ny fivoriana fivoriana iray.
KOLONTOLO MEDIA FAHAFATESANA TANORA - MOMBA AN-TRANO
Taorian'ny enin-taona famolavolana (miampy, famolavolana indray), fametrahana audio-visual, broadcast ary audio-famokarana horonam-peo - tonga ny fotoana hitondrana ireo mpiasan'ny 120 ao amin'ny birao vaovao. Ny mpiasan'ny 120 dia mila voaofanina amin'ny làlan-jotra vaovao, rindrambaiko ary hardware, toy ny Dalet Galaxy sy ProTools. Ity fiofanana ity dia ankoatry ny rafitra hafa efa ho ampolony mahery izay mila nianarana injeniera KCRW.
Key Code Media dia nandany herinandro maromaro niaraka tamin'ny departemanta KCRW isan-karazany izay manome fiofanana manokana amin'ny tranokala an-trano momba ny fitaovana sy arofanina ao anaty trano vaovao.
“Fiovan'ny teknolojia lehibe ho an'ny toerana misy anay io, ary tsy ho nahomby raha tsy nampiofana tsara ny mpiasa amin'ny lafiny rehetra ao anatin'ny fitaovana tsirairay. Ny tena mahafinaritra momba ny Key Code Education, dia na dia taorian'ny andro fampiofanana teto an-toerana aza dia fantatray fa afaka maka ny telefaona izahay ary mahazo mamaly haingana ireo fanontaniana amin'ny fotoana rehetra. Tsy zavatra azonao avy amin'ny mpanamboatra azy akory izany, ”hoy i Steve.
Santa Monica Tonga tao amin'ny Key Code Media miaraka amina fanamby iray, hamindra ny 35 taona amin'izy ireo hiala ny efitranony.
Ao anatin'ny tetik'asa 11 tapitrisa $, KCRW, ny foibe radio NPR voalohany tany South California dia nafindra avy tao amin'ny rihana ambanin'ny tany ho lasa fananganana vaovao. Ny haben'ny tetik'asa taona maro dia nahitana ny famolavolana ny famolavolana tanteraka, ny injeniera ary ny serivisy fampidirana ao amin'ny efitrano famokarana Studio sy Televiziona lehibe, efitrano fanaraha-maso Audio, Studio ADR, efitrano fanaraha-maso radio roa, efitrano famokarana telo, efam-peo miisa efatra, Suites fito, efitrano fianarana valo ambin'ny roapolo, efitrano fihaonambe telo, ary efitrano malalaky ny efitrano valopolo. Ny serivisy fampidirana dia misy ny cabling, ny fametrahana, ny komisiona, ny fiofanana ary ny fifanarahana fanohanana mitohy. Ity fametrahana multi-fitsipi-pifehezana ity dia nahitana fitaovana maro isan-karazany amin'ny Live, Post, Automation ary Audio.
Audio over IP mazoto fampitana injeniera fampitana Engineering CES2017 Cobalt Encoder Edward Locke Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor fampidirana James Blake KCRW Radio KCRW Key Code Media MStar Famoronana Ross SJGolden - SoftAtHome Telo sy zana-tsipìka Steven Herbert Storage TVU Networks Video injeniera 2019-10-30
Previous: CTV Vancouver Island dia mitondra ny sary HXC-FB80 HD Studio Cameras On Board ny Sony
Next: Alao ny Ekosystem miafara farany amin'ny Panavision ao amin'ny 2019 Camerimage